विदेशमा रोजगार | सबैका लागि उपयोगी जानकारी।
कोटी: विदेशमा रोजगार
म कसरी संयुक्त राष्ट्रमा काम गर्न सक्छु?
तपाईं संयुक्त राष्ट्र संघमा कसरी काम गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईं पुतिन वा मेदवेदेवलाई सोध्नुहुन्छ। पहिले निर्णय गर्नुहोस् कि - एक साथीको साथीले त्यहाँ अनुवादकको रूपमा काम गर्दछ -5वा foreign विदेशी भाषाहरू थाहा छ, तर उनीसँग ...
मेरो सर्वेक्षकको पेशा के हो?
कस्तो प्रकारको पेशा खानी सर्वेक्षणकर्ता हो यहाँ माथि तपाईले सबै बिस्तृत वर्णन गर्नु भएको छ। म सरल व्यावसायिक भाषामा भन्ने छुः एक सर्वेक्षणकर्ता भूमिगत सर्वेक्षणकर्ता हो, ऊ सेपर जस्तै छ, एक पटक ठूलो गल्ती गर्छ, जस पछि उसले छोड्न सक्छ ...
Zdrastvujte! कसैले अमेरिकामा काम खोज्न वा कसरी नियोक्ता पत्ता लगाउनको लागि अमेरिकी साइटहरूको सुझाव दिन सक्छ?
नमस्कार! के कसैले अमेरिकामा अमेरिकी रोजगार खोज साइटहरू सुझाव दिन सक्छ, वा रोजगारदातालाई कसरी पत्ता लगाउने? र तपाईंलाई अमेरिकी निवास अनुमतिसँग कुनै समस्या छैन वा तपाईं अत्यन्त मूल्यवान हुनुहुन्छ ...
बिजुलीको वेतन कसले तपाईंलाई भन्नेछ कि क्यासिनो र सेन्ट पीटर्सबर्गमा बिजुलीको वेतन?
इलेक्ट्रीशियन तलब। मस्को र सेन्ट पिटर्सबर्गमा इलेक्ट्रीशियनको तलब के हो भनेर कसले दिन सक्छ? यो एक आईपी जारी गर्न को लागी राम्रो छ। धेरै पटक बाहिर आउँछ। काजानमा, मेरो लागि एक इलेक्ट्रीशियन तारमा ...
खान र खननमा काम प्रस्ट-टाइ अष्ट्रेलिया कैनिंगटन-एग
खान र खानीमा काम अस्ट्रेलिया कैन्टन्टन-एगमा प्रोम-टाई केही तिनीहरू सबैले सकारात्मक जवाफ दिन्छन्, तिनीहरूले मलाई यो पनि भने कि म आउँदै छु, धेरै अनौंठो यी सबै कृपया मलाई पठाउनुहोस् ...
कसले साँच्चै तेल र ग्याँस प्लेटफार्महरूमा नर्वेमा काम गरे? के यो त्यहाँ जान योग्य छ वा यो घोटाला हो? मलाई भन
के कसैले तेल र ग्यास प्लेटफर्ममा नर्वेमा वास्तवमै काम गरेको छ? यो त्यहाँ जान लायक छ कि यो एक घोटाला हो ??? मलाई भन! त्यस्तै काम छ। तलब धेरै राम्रो छ! तर तपाईं, साथी, त्यहाँ पुग्न छैन! का लागि: १) ...
मलाई बताउनुहोस् कि यूक्रेनबाट तेल प्लेटफार्महरूमा तपाईं कसरी नौकरी प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, यूक्रेनबाट
मलाई भन कि रूसमा तेल प्लेटफार्ममा कसरी काम पाउन सकिन्छ, यदि तपाईं आफैं युक्रेनबाट हो हो भने चीनबाट पनि ठेक्का खार्कोभमा छ र अगाडि, यदि तपाईंले त्यो मौसमको सामना गर्न सक्नुहुन्छ भने। भित्र आउ ...
कसले फिनल्याण्डमा काम गर्न स्ट्रबबेरी छनौट गर्न को लागी ???
फिनल्याण्डमा स्ट्रबेरी लिन को लागी काम गर्न को लाग्यो ??? मौसम जूनको शुरू-जुलाईमा (मौसममा निर्भर गर्दछ) मा शुरू हुन्छ र जुलाई को अन्तिम दिनहरूमा समाप्त हुन्छ। आफ्नो स्ट्रबेरी क्षेत्रहरु को लागी प्रसिद्ध ...
कसरी कसरी अमेरिका जान र काम गर्न जानुहुन्छ?
कसरी अमेरिका जाने र काम गर्ने? पहिले, रूसमा हरियो कार्ड जित्नुहोस् र भिसा लिनुहोस्! यदि तपाईंसँग पहिले नै हरित कार्ड छ भने, तब तपाईं बाँच्न सक्नुहुन्छ, कार्य गर्न सक्नुहुन्छ, ...
मलाई कसरी कामको लागि रूसी संघको सुनको खण्डहरूमा जान सकिन्छ। तर अंकहरू र ठेगानाहरू मात्र लगाइयो। म यूक्रेनबाट छु।
मलाई कसरी रूसी संघको सुन खानीमा काम गर्ने भनेर बताउनुहोस्। तर प्रमाणित नम्बरहरू र ठेगानाहरू वा वेबसाइटहरू मात्र। म युक्रेनबाट हुँ। वर्क परमिट सहित तपाईलाई धेरै कागजातहरू चाहिन्छ।
क्यानाडामा कसले तपाईंलाई वास्तविक जागिर साइट बताउन सक्छ?
तपाईंलाई क्यानडामा वास्तविक जागिरको साइट कसले भन्न सक्छ? हामी क्यानाडाली परिवारमा शैक्षिक शिक्षा भएका महिलाहरूका लागि रोजगारी पाउन वा परिवारमा नानी र गभर्नरिजको रूपमा काम गर्ने अनुभव प्रदान गर्दछौं। सुरुमा ...
सिरियामा सम्झौताको रूपमा सेवा गर्न सम्भव छ?
के यो सीरियामा सम्झौतामा सेवा गर्न सम्भव छ? म त्यहाँ जान चाहन्छु ... नम्निकी लडाकू होइन र लडाईको कैदीमा कुनै अधिकार छैन। यसको मतलब यो कि नामनामले मुद्दा चलाउन सक्ने जोखिममा दौडछ ...
विदेशमा काम गर्न राम्रो कहाँ जान सकिन्छ? जहाँ हरेक ठाउँ भन्दा बढी वेतन?
सल्लाह दिनुहोस्, विदेशमा काम गर्न कहाँ उत्तम हुन्छ? अरू ठाउँमा भन्दा बढी तलब कहाँ छ? यो हुदैन ... संयुक्त राज्य अमेरिका मा एक वर्क परमिट तीन देखि पाँच हजार डलर खर्च, ब्रिटेनमा -
56 सेकेन्डमा उत्पन्न डाटाबेसमा 0,717 प्रश्नहरू।